HIV ပိုးကာကွယ်ဆေး: Non-လူ့မျောက်ဝံများအပေါ်စမ်းသပ်ပြီးနှင့်ကအလုပ်လုပ်တယ် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အကြံပြုချက်များ Sant • ကျွန်မရဲ့ကျန်းမာရေး "HIV ပိုးကာကွယ်ဆေး: Non-လူ့မျောက်ဝံများအပေါ်စမ်းသပ်ပြီးနှင့်ကအလုပ်လုပ်တယ်
HIV ပိုးကာကွယ်ဆေး: Non-လူ့မျောက်ဝံများအပေါ်စမ်းသပ်ပြီးနှင့်ကအလုပ်လုပ်တယ်
Teddy Oben 13 မတ်လ 2019
ထက်ပိုမို 20 နှစ်ပေါင်းအဘို့, Scripps မှာသိပ္ပံပညာရှင်များအနေနဲ့ HIV ပိုးကာကွယ်ဆေးဒီဇိုင်း၏စိန်ခေါ်မှုများမှာကွာပဲ့သုတေသန-ပါပြီ။ ထုတ်ဝေ Now ကိုအသစ်သောသုတေသန, ရောဂါမှကာကွယ်ထားခြင်းသူတို့ရှိုးပွဲစမ်းသပ်ကာကွယ်ဆေးမဟာဗျူဟာ Non-လူ့မျောက်ဝံများအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလိုသည်မှာ။
အဆိုပါလေ့လာမှုအသစ်စမ်းသပ်တာမျိုးဟာ Macaque မျောက်အမြားဆုံးရောဂါကူးစက်လူတွေကဒါကဗိုင်းရပ်စ်ပုံစံဒဏ်ခံနဲ့တူအောင် HIV ပိုး၏တဦးတည်း strain contre neutralizing ပဋိထုတ်လုပ်သတိပေးခံရမည်ဖြစ်သည်နိုင်သလားဒါကပြသက်တမ်းကုန်သည် Tier2ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုခေါ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသုတေသနစတေးလျတွင် HIV ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးရန်လိုအပ်ကာကွယ်ဆေး-သွေးဆောင် neutralizing antibody ကိုအဆင့်ဆင့်၏ပထမဆုံးခန့်မှန်းချက်ပေး။
"ကျနော်တို့ကိုတွေ့-ပြီဒါက-ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် neutralizing ပဋိတွေအများကြီးအစစ်အမှန်ကမ္ဘာ HIV ပိုးတူဒါကဗိုင်းရပ်စ် contre တိရိစ္ဆာန်များကာကှယျပေးနိုငျဒါက" Dennis Burton, Ph.D, ရောဂါပြီးပညာနှင့်အဏုဇီဝဗေဒ၏ Scripps သုတေသနဌာန၏ကုလားထိုင်ကို၎င်း, International ၏သိပ္ပံဆိုင်ရာဒါရိုက်တာကပြောပါတယ် AIDS ရောဂါကာကွယ်ဆေး Initiative (IAVI) ကြားနေ antibody ရေးစင်တာနှင့် HIV / AIDS ရောဂါကာကွယ်ဆေးရောဂါပြီးပညာနှင့် Immunogen Discovery (CHAVI-ID) အတွက်ကျန်းမာရေးရဲ့ Center ကအမျိုးသား Institutes ၏။
ကာကွယ်ဆေးဝေးလူ့လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေထံမှဖြစ်သော်လည်းလေ့လာမှု Burton နဲ့သူ့ဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲ 1990s ကတည်းကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်--ခဲ့ပြီ HIV ပိုးကာကွယ်ဆေးမဟာဗျူဟာအဘို့သက်သေ-of concept ကိုပေး။
ဤနည်းဗျူဟာ၏ရည်မှန်းချက် HIV ပိုးပေါ်ရှားပါးအားနည်းချက်ဒေသများခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နှင့်သူများသည်ဒေသများတိုက်ခိုက်ရန်ပဋိစေရန်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကသင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Scripps သုတေသနဦးဆောင်တဲ့လေ့လာရေး Que la ခန္ဓာကိုယ် neutralizing ပဋိထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်ပြသိပ္ပံပညာရှင်များ-ရှိသည်ဟုပြင်စာအိတ်ပရိုတိန်း trimer ရဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မှခညျြနှောငျ။ ဒီစိတ်ကူးကိုထောက်ပံ့ဖို့, သိပ္ပံပညာရှင်များသူတို့ Lab မှထုတ်လုပ်ခဲ့ပဋိ neutralizing နှင့်အတူ em ထိုးသွင်းခြင်းဖြင့် HIV ပိုးကနေတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုပဋိမိမိတို့ကိုယ် neutralizing စေရန်တိရစ္ဆာန်ရဖို့ထိုအခါခဲ့။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သိပ္ပံပညာရှင်များထိရောက်စွာဒီပစ်မှတ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင့် contre ညာဘက်ပဋိထုတ်လုပ်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်, စာအိတ်ပရိုတိန်း trimer ဖို့ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကဖော်ထုတ်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတခုရှိ၏။ အဆိုပါ HIV ပိုးစာအိတ် trimer မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီးအထီးကျန်သည့်အခါဆိတ်ကွယ်ရာလဲကြလေ့ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုသိပ္ပံပညာရှင်များကာကွယ်ဆေးအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုရန်နိုင်မလား သိပ္ပံပညာရှင်များမျိုးရိုးဗီဇတစ်ဦးထက်ပိုသောအမြဲတမ်း trimer, ရွှေ SOSIP အင်ဂျင်နီယာတဲ့အခါမှာ cam 2013 အတွက်အောင်မြင်မှုများ။
"ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, ကျနော်တို့တော်တော်လေးတာက HIV စာအိတ်ပရိုတိန်း trimer ဆင်တူတစ်ခုခုခဲ့," ဿိ Pauthner, Ph.D, သုတေသန Scripps သုတေသနမှာတွဲဖက်နှင့်လေ့လာမှုအသစ်ပူးတွဲပထမဦးဆုံးစာရေးဆရာကပြောပါတယ်။
အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်များလျင်မြန်စွာဒီ SOSIP တည်ငြိမ်ပင်ပန်းပါရှိသောဒါကတစ်ခုစမ်းသပ် HIV ပိုးကာကွယ်ဆေးဒီဇိုင်းနှင့်အတူရှေ့သို့ရွှေ့ခဲ့၏။ အဆိုပါလေ့လာမှုအသစ်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ရည်မှန်းချက် vaccinia ဒီလိုမျိုးတကယ်တော့ရောဂါကူးစက်မှုကနေတိရစ္ဆာန်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်လျှင်ကြည့်ဖို့ခဲ့။
အဆိုပါအဖွဲ့သည်စမ်းသပ်တာမျိုးမျောက်များ၏အုပ်စုနှစ်စုအတွက်ကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ အခြားသူများကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက်မြင့်မားသော titers တီထွင်စဉ်တချို့ကကိုယ်ခံစွမ်းအားမျောက်သဘာဝကျကျ, သူတို့၏အလောင်းများကိုခုနှစ်တွင်အနိမျ့ (antibody ကိုအဆင့်ဆင့်) တီထွင် antibody ကို titers neutralizing ခဲ့ပြထားတဲ့ vaccinia Sami အဘိဓါန်သုံးပြီးတစ်ဦးကယခင်လေ့လာမှု။ ဒီလေ့လာမှု မှစ. , သုတေသီများရှေးခယျြထားနှင့်ခြောက်လအနိမ့် titer မျောက်နှင့်ခြောက်လမြင့်မားသော titer မျောက်-ကာကွယ်ဆေးကိုပြန်လည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုအဖြစ်ကိုလေ့လာ 12 unimmunized မျောက်ဝံများသြစတေး။
အဆိုပါမျောက်ဝံများထိုအခါလူ့ဗိုင်းရပ်စ်အဖြစ် la meme စာအိတ် trimer ပါရှိသည်ဒါကသက်တမ်းကုန် SHIV လို့ခေါ်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ပုံစံ, HIV ပိုးတစ်ခုအင်ဂျင်နီယာ Simian ဗားရှင်းထိတွေ့ခဲ့။
ဒါဟာ-ထားပြီးအများကြီးလူ့လူဦးရေအတွက်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ HIV ပိုး၏ပုံစံများကဲ့သို့ကြားရန်ခက်ခဲဖြစ်ပြကြောင့်ဒီ virus အထူး strain2ဗိုင်းရပ်စ်အဖြစ်လူသိများနေတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါသုတေသီများကမြင့် titer တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ Que la ကာကွယ်ဆေးထိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါမျောက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပိုးကူးစက်မှုကိုတားဆီးဖို့စာအိတ်ပရိုတိန်း trimer ဆန့်ကျင် neutralizing ပဋိ၏လုံလောကျအဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါ။
"HIV ပိုးပေါ်ထွက်လာပြီးကတည်းက, ဒီကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက်ဗိုင်းရပ်စ်သည် Tier2ထံမှ antibody ကို-based ကာကွယ်မှုကျနော်တို့-ရှိပထမဦးဆုံးသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်" ဟု Pauthner ကပြောပါတယ်။ "တစျခုကိစ္စကိုယခုကျွန်တော်တိရစ္ဆာန်သို့ထိုကဲ့သို့သောမြင့်သော titers ရနိုင်ပုံ?"
အဓိကအာရုံစိုက်မြင့် titers ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်, လကျအတိုင်း HIV ပိုးသုတေသီများကကာကွယ်မှုဆုတ်ကိုမွငျလြှငျအထူးသဖြင့်အဖြစ် titers est devenu ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုအဆက်မပြတ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမှတိရိစ္ဆာန်များကိုဖျောထုတျနေစဉ် titers ခြေရာခံမှာသုတေသီများကပင်လယ်အော်မှာ HIV ပိုးကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည့် titers သန္နိဋ္ဌာန်။
အရေးကြီးတာက, လေ့လာမှုစတေးလျ, ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်၏အခွားကဏ်ဍပဋိ neutralizing, ဒါပေမယ့်မပေးကြောင်းပြသဗိုင်းရပ်စ်ရပ်တန့်ဖို့သော့ကိုခံခဲ့ရသည်။ Pauthner ဒီနှစ်သိသိသာသာတွေ့ရှိချက်ကပြောပါတယ်အခြားကတည်းကရောဂါကူးစက်ပိတ်ဆို့ဖို့ T ကဆဲလ်များနှင့်အခြားကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကကာကွယ်ရေးများအတွက်အလားအလာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဓာတ်ခွဲခန်းများ-ပါပြီ။
ရှေ့ဆက် Going, သိပ္ပံပညာရှင်ကာကွယ်ဆေးဒီဇိုင်းများအတွက်လူ့စမ်းသပ်မှုတွေကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေနှင့်မြင့်မားသော titers စောင့်ရှောက်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါ။ "နောက်ဆုံးရှည်စေရန်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစူးစမ်းနိုင်အတော်များများက immunological အကောက်ရှိပါတယ်," Pauthner ကပြောပါတယ်။
အဆိုပါသုတေသနပညာရှင်များကကျယ်ပြန့်အဲဒီအစားစာတမ်းလေ့လာမှုများမှာဖော်ပြထားတဲ့တစ်ခုတည်းသော strain ထက် HIV ပိုး၏အတော်များများမျိုးကွဲကြားနိုင်ပါတယ်ဒါက neutralizing ပဋိ (bnAbs) ထုတ်ယူနိုင်ရန်မဟာဗျူဟာလိုက်ရှာနေကြတယ်။ "ဒီသုတေသနကျနော်တို့တကမ္ဘာလုံးတွင် HIV ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်နိုင်ရန်အတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးမှတဆင့်သွေးဆောင်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါစေဒါက bnAbs ၏အဆင့်ဆင့်၏ခန့်မှန်းချက်ပေးသော်လည်း," Burton ကပြောပါတယ်။
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ ကပံ့ပိုး Scripps Research Institute မှ. မှတ်ချက်: အကြောင်းအရာစတိုင်နဲ့အရှည်အဘို့အ edited နိုင်ပါသည်။